Dutchtown CID ခြေရာ• Dutchtown CID •ဒတ်ခ်ျတောင်းရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင်
အဆိုပါ Dutchtown CID ခြေရာ
Dutchtown Community Improvement ခရိုင်သည် South Grand Boulevard တစ်လျှောက်ရှိ Chippewa လမ်းမှ Bingham ရထားလမ်း၊ Grand မှ Compton မှ Meramec လမ်း၊ Virginia မှ Meramec မှ Bates လမ်းနှင့် Osceola လမ်းဗာဂျီးနီးယားမှ Compton အထိအကျုံးဝင်သည်။
သင်ရှာနိုင်သည် အပြည့်အဝတရားဝင်ဖော်ပြချက် City Ordinance # 70559 မှသတ်မှတ်ထားသော CID ခြေရာ၏။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် CID ၏ကြီးမားသော PDF မြေပုံကိုကြည့်ပါ.
Dutchtown CID ၏ခြေရာ။
ဒီစာမျက်နှာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် စက်တင်ဘာလ 3rd, 2020 .
ဒိန်းမတ် အဆိုပါ Dutchtown CID ခြေရာ